सरकार र अनशनरत डा. गोविन्द केसीबीच आठबुँदे सहमति - Rajmarga
सरकार र अनशनरत डा. गोविन्द केसीबीच आठबुँदे सहमति
काठमाडौं । सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच शनिबार मध्यराती शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा ८ बुँदे सहमति भएको छ । २७ दिनदेखि आमरण अनसनरत डा. केसी र सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गोपी मैनालीले शनिबार मध्यरातमा सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यो सहमतिसँगै डा. केसीले २७ दिनदेखिको आमरण अनसन आइतबार विहान ९ः३० बजे अन्त्य गर्ने भएका छन्।
Previous post:मन्त्री याेगेश भट्टराईलाई काेराेना संक्रमण
Next post:थाहा पाइराख्नुस आज आइतबारको राशिफलमा तपाईको भाग्य कस्तो छ ?